I-Raw Finasteride powder (98319-26-7) hplc =98% | Ukwahlula i-sex powder
/ iimveliso / Ukuxhatshazwa kwezesondo kwiHormones / IFinasteride powder
SKU: 98319-26-7. Udidi: Ukuxhatshazwa kwezesondo kwiHormones
I-AASraw inokusetyenziswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-order order enkulu ye-Finasteride powder (98319-26-7), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Imiphumela ye Finasteride powder zenzelwe ngokukodwa ukunciphisa ukunciphisa i-testosterone kwi-dihydrotestosterone eyenzeka ngenxa ye-hormone ye testosterone i-metabolized enzyme ye-5-alpha reductase. Imiphumo ye-Finasteride inamandla kakhulu kwidatha yeprotate ibonise ukuba iinyanga ze-6 ze-Finasteride unyango lunokunciphisa ngokupheleleyo ukwandisa i-prostate.
Raw Finasteride powder ividiyo
I-Raw Finasteride powder ezisisiseko
I-molecular Formula: C23H36N2O2
Isisindo somzimba: 372.54
Melt Point: 253 ° C
umbala: I powder
Ukusetyenziswa kwe-Raw Finasteride powder
Propecia, Proscar, i-Finasteride powder (i-CAS 98319-26-7)
Ukusetyenziswa kwePowderide powder
I-Finasteride yayisetyenziswe ngomlomo. Ukuze i-BPH isetyenziswe, abantu abaqhelekileyo baphumelela kwi5mg ixesha, kanye ngosuku. Ukulahlekelwa kweenwele zendoda, 1mg ixesha, kanye ngosuku.
Isixwayiso kwi-Raw Finasteride powder
I-Finasteride powder (i-CAS 98319-26-7) ngokuqhelekileyo iyakunyamezela ngamadoda amaninzi, kodwa i-moderation ukuya ekungalingani kwe-androgen kunokwenzeka ngenxa yokusetyenziswa. Iziphumo eziqhelekileyo ezichaphazelekayo ze-Finasteride ziya kujikeleza ukusebenza kwezesondo. Amanye amadoda, nangona anqabile kakhulu angabonanga ukuba abonise iimpawu ze-gynecomastia, kwaye kwiimeko ezinqabile kakhulu.
Nangona ukusetyenziswa kwe-Finasteride kunokunceda ngexesha lokusebenzisa i-anabolic steroid, gcina ingqondweni isebenza kuphela kwi-steroids exoxwe ngentla. Ukongeza, ukusebenzisa i-Finasteride kunye ne-Testosterone, i-Methyltestosterone okanye i-Fluoxymesterone inokunciphisa kakhulu iziphumo kunye nokusebenza kwezi-steroids ezinjalo. Oku kuya kukhokelela umntu ukuba asebenzise kuphela inhibitor xa kufuneka; ukuba akunjalo, akukho nto ayikhoyo ekusebenziseni kwakhe i-anabolic steroid. Kufuneka kuphawulwe, ngelixa i-Finasteride ayiyi kuba nefuthe kwiimveliso ze-DHT kwaye inokwandisa i-androgenicity yeNandrolone kunye neTrenbolone, iya kuba neyomodareyitha kakhulu ukuba ingabi nciphisa i-androgenic nefuthe kwi-Boldenone (i-Equipoise) ne-Methandrostenolone (i-Dianabol).
I-Raw Finasteride powder Powder (i-CAS 98319-26-7)
I-Raw Finasteride powder Marketing
Indlela yokuthenga i-Finasteride powder (i-CAS 98319-26-7) esuka kwi-AASraw
I-AASraw inikeza ubungqina 98% I-Finasteride i-powderide eluhlaza kumalungu omzimba okanye iibhabhi zangaphantsi zokusetyenziswa komlomo.
I-Finasteride Raw Powder Recipes:
Ndingayithenga phi i-high quality finasteride powder
I-Exemestane (Aromasin) ipowder
I-Methandrostenolone (Dianabol) ipowder